प्रिय शालिकराम, छातीमा प्रहरीको लाती बजारिदा सम्म नरोकिएको तिम्रो पत्रकारिता किन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेउ ! – ताजा समाचार
प्रिय शालिकराम, छातीमा प्रहरीको लाती बजारिदा सम्म नरोकिएको तिम्रो पत्रकारिता किन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेउ !
काठमान्डौ , चितवनको पोखरा बसपार्कमा झु*ण्डिएको अवस्थामा फेला परेका पत्रकार शालिकाराम पुडासैनी केही साता अघिमात्र माउण्टेन टेलिभिजनमा गएका हुन । उनले लामोसमय न्यूज २४ टेलिभिजनमा रवि लामिछानेसँग काम गरेका थिए । त्यही कारण उनले रविलाइ गुरू भन्ने गरेका थिए । उनले गएको गुरू पूर्णिमाका दिन अाफ्नो फेसबुक प्रोफाइल चेन्ज गर्दै रविसँगको फोटो राखेर गुरू पूर्णिमाका दिन दादालाइ सम्झिए भन्दै तस्बीर पोष्ट गरेका थिए । सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चर्चित बनाउन रवि लामिछानेलाइ साथ दिएका उनी फेसबुकमा समेत चर्चित थिए ।
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ३ घर भएका शालिकराम पुडासैनी चितवनको कंगारू होटलको कोठामा झु*ण्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।पत्रकार पुडासैनी सोमबार राति नै झु*ण्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन । प्र हरीले उनको साथमा रहेको परिचयपत्रका आधारमा उनको आफन्तलाइ राति नै खबर गरेपछि उनीहरू अहिले चितवन पुगेका छन ।भरतपुर महानगरपालिकाको पोखरा बसपार्कको होटल कलशमा झु*ण्डिएका युवाको साथबाट प्रहरीले माउन्टेन टेलिभिजनको परिचय पत्र र होटलमा टिपाएको नामको आधारमा उनि पत्रकार पुडासैनी नै रहेको पुष्टि गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार उनको परिवार घ*टनास्थलमा पुगेको छ । अहिले मु*चुल्चा तयार गर्ने काम भैरहेको छ । उनी नाइलको डोरी पंखामा पासो लगाएर झु*ण्डिएको प्रहरीले बताएको छ ।प्रहरीका अनुसार पुडासैनी सोमबार दिउँसो करिव ३ बजे काठमाडौँबाट होटलमा पुगेका थिए । होटल बुकिङ गरेर केही समय होटलमा कोठामा बसी केही समयपछि होटलबाट बाहिर गएका थिए र पछि होटलमा आएर बसेका उनी खाना खान नआएपछि होटलका कर्मचारीले बोलाउन जाँदा उनीले कोठा नखोलेपछि प्रहरीलाइ खबर गरेको र त्यसपछि वडा प्रहरी कार्यालयका प्रहरीले घ*टनास्थल नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
पत्रकार पुडासैनी सिधा कुरा जनता संगको एक निडर पत्रकार थिए । उनले रिपोर्टिंग को क्रममा धेरै पटक प्रहरीकै लाती समेत छातीमा थापेका थिए धेरै पटक क्यामेरा फुटाइएको थियो । तर पनि उनको पत्रकारिता रोकिएको थिएँन।उन्ले नयाँवस पार्कमा हुने रेस्टुरेन्टहरुको ठगि धन्दा देखि बिभिन्न ठाउको स्ट्रिंग अपरेशन समेत गरेका थिए । माउन्टेन टेलीभिजन को मिसन न्युज मा उनले राजमार्ग मा खुवाउने गरिएको गुणस्तर हिन खानाको बिषयमा समेत कार्यक्रम वनाएका थिए ।